Ukufunda - inhlanganisela esiphelele ibhizinisi ubumnandi. Ngakolunye uhlangothi, kungcono wokuzilibazisa, enkulu elingenakuphikwa enchubeni, ngakolunye - ulwazi e injalo elicwengekileyo. Kusukela zisencane, thina bagomela ngokuthi Ukufundwa - kuhle lokho. Akufanele singayinaki kubo, ngoba isikhathi eside, ososayensi bezinzwa bathole ukuthi le nqubo, lo mshini esifana izinhlamvu.
Ukuthatha usizo Dictionary Dahl, ungabona definition elandelayo yomuntu erudite - usosayensi, isebenziseka ngezindlela eziningi abafundile, kodwa ngaphezu kwakho konke kahle ukufunda. "Ukuphila wahlala - hhayi hambisa ensimini" - kusho isaga esidala, sokujezisa lowo kulo zilethwe ukuphila ukuhlangabezana izinto eziningi engakaze ibonwe, futhi ngakho-ke kudingeka sihlale sikulungele yini, futhi ngokuqinisekile lapha ukuthuthukiswa oluphelele - umsizi engcono. Ngakwelinye ihlangothi, ukufunda - lena ukuze ukwazi ukufeza le erudition.
Yini umuntu ezithakazelisayo ukuxhumana? Impendulo kuza ngokushesha, intuitively. Kodwa ngaphambi kokuba uphendule, ungahamba kuye ngokunengqondo: zokuxhumana - ke yizingxoxo, ingxoxo lapho ngemibono, idatha kanye nolwazi. Ngenxa yalokho, umuntu nabo ezithakazelisayo ukuxhumana, kufanele kube nokuthile okuzothatha okushoyo. Ukufunda izincwadi - lokhu kubalulekile ngenxa kubo hhayi kuphela bangafunda okuningi ngokwakho, kodwa futhi bebodwa ukufinyelela eziphethweni entsha. Ngenxa yalokho, it has nemiphumela ezuzisayo phezu isikhundla senqubo yokucabanga evamile.
Inqubo yokufunda - iwukuba ukwandisa ulwazimagama kanye nokufunda nokuloba kakhulu. Akusiyo imfihlo ukuthi ingane kahle ukufunda kulula kamuva ukubhala dictations, ukwakha imisho, ngoba wakhumbula yonke imithetho isiRashiya ezingeni esesimweni sokungaphili ngokuphelele, ngaphandle ngisho ecabanga ngabo. Izingane abathanda ukufunda, musa unezinkinga yokufunda - hhayi kuphela humanities; lesendzabeni abuye amanoveli babe esizeni olunembile kwendaba, futhi kunengqondo, ngoba ukufundwa - lokhu kuvumelana kwetinhlavu zesakhiwo, okuyinto kusiza ukuqonda izinkinga ngenxa yalokho.
Uhlobo biography / okukhuluma, futhi, kungaba wusizo kakhulu. Ukufunda kothile ukuphila Nonfictional okwamanje samanje, okuyinto engakaze ihlangane nabo eqinisweni, kodwa ukuba bafinyelele iziphetho, sifunde emaphutheni abanye '. Yingakho biography romanized - kungumsebenti eqanjiwe hhayi ukuyifunda.
Inkululeko yokuzikhethela - nenkululeko umphefumulo
Ukufundwa Literary - iyithuluzi of ekwetayeta abafundi ukuba izinhlobo ezahlukene izincwadi. Ukukhethwa izincwadi lwezifundo zesikole njalo eyakhelwe eyolanda izingcezu, kulungele izingane ezingeni zawo zentuthuko ukuthi zibhekene ngqo kobudala bazo, futhi emikhakheni ehlukahlukene. Benza-ke kungenzeka ukumboza anhlobonhlobo amathuba izincwadi, ukuze kamuva enze ngaso indoda akhethe incwadi ku umoya kanye nemizwelo. Ukufundwa Literary eliqondisa ingane, amenze ukwazi ukuthi izwe futhi yena.
Ukuthuthukiswa yokukhuluma kanye silulumagama
Akubalulekile nje kuphela lokho ukufunda, kodwa futhi indlela yokukwenza. Lapho esemncane wayekwenza ukufunda ngokuzwakalayo - enkulu ohlelweni esikoleni sabaqalayo kuyinto isihloko igama elifanayo, okuyinto lithuthuka okwengeziwe, esiholela "izincwadi," okuza kuqhame okushiwo imisebenzi. Kodwa ukufunda ekhululekile - akuyona nje ezikhethekile kakhulu esikoleni eside, njengoba sekuyinto Manje. Ngaphezu othisha, odinga ukuhambisa imisebenzi yobuciko in ukukhanya engcono, ukufunda ngokuzwakalayo izindinyana nokugxila ezintweni eziqakathekileko, kuba izipikha ewusizo futhi esikhathini esizayo. Kanjani ncamashi? Lokho aphindaphinde efanayo - ubuciko isitayela kwezobuciko, kodwa leli gama yake lahlotshaniswa nokuba ukufunda bayaxoxa, kudinga ukuhlela okufanele, silulumagama ezinhle nefa ubugagu.
Ingabe zonke lezi zimpikiswano is hhayi okwanele ukuba aphethe ngokuthi Ukufundwa - indlela ejabulisayo, ewusizo futhi kubalulekile? Kodwa lokhu kumane nje kuyisiqalo loko: Eqinisweni, ubufakazi ezingenakubalwa okuningi. Ungakhuluma isikhathi eside ngendlela enhle bagxuma ezweni umcabango kanye fantasy, ngemuva kosuku olude; kanjani efudumele futhi ethokomele ukuhlala incwadi esihlalweni ezinkulu, sisongwe ngengubo yokulala, kuyilapho ngaphandle imvula ebandayo; bangaki amaqiniso ezintsha nezithakazelisayo kungenziwa lithathwe iTalmud elikhulu lemiqulu emikhulu; kokubili phakathi Amakhasi enothuli wolwazi olufihliwe, nendlela emangalisayo ukuphuma ngokwakho. Indlela emangalisayo ngiphindelela incwadi ozithandayo eminyakeni embalwa futhi usathola kuwo into wazibona ngaphambili.